कसरी मनाउँदै छन् शीर्ष नेताले दसैँ ? | Hulaki Online
कसरी मनाउँदै छन् शीर्ष नेताले दसैँ ?
काठमाडौं, कात्तिक ४ – दिनहुँ राजनीतिक छलफलमै व्यस्त भइरहने नेताहरु दसैँको समयमा पनि परिवारले सोचेजति समय दिन सक्दैनन् । तरपनि दसैँका बेला अन्य भेटघाट र छलफललाई कम गरेर उनीहरु परिवारसँग व्यस्त हुने तयारीमा छन् ।
केही नेताले भने दसैँलाई पनि आफ्ना कार्यकर्ता भेटघाटको अवसरका रुपमा प्रयोग गर्दै छन् । शीर्ष नेताहरु राजनीतिक कार्यक्रमबाट समय निकालेर कसरी मनाउँदैछन् त दसैँ ?
यसपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दसैँ विशेष छ । प्रधानमन्त्री भएपछिको उहाँको यो पहिलो दसैँ हो । संसदमा एमाओवादी सहितका अधिकांश दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओली टीकाको अघिल्लो दिन बुधबार झापा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँ बिहीबार टीकाको दिनमा भने सरकारी निवास बालुवाटारमै परिवार र कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा व्यस्त रहनुहुनेछ । उहाँका लागि भन्दा धेरै कार्यकर्ताका लागि आफ्ना नयाँ प्रधानमन्त्रीको हातबाट टीका थाप्नु दसैँको नयाँ उल्लास हो ।
उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा यसपालि दसैँमा घरमैै व्यस्त रहनुहुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री थापाको गृह जिल्ला मकवानपुर भएपनि उहाँ अहिले काठमाडौंमा नै रहेको घरमा आफ्ना आफ्न्त, कार्यकर्ता तथा अरु पाहुनासँग व्यस्त रहनु हुनेछ । अघिल्ला वर्षको दसैँका बेला लङ टेनिसमा व्यस्त रहने थापाको यसपालि खेलकुदको योजना छैन । यसअघि दसैँको टीकाको दिन पूर्व राजाको हातबाट टीका लगाउनुहुने थापाले यसपाली के पो गर्नुहुन्थ्यो । तर पूर्व राजाले कसैलाई पनि टीका नलगाउने घोषणा गरिसक्नुभएको छ ।
पूर्व प्रधामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले यसपाली दसैँको टीका लगाउनु हुन्न । उहाँ टीका नभएपनि गृह जिल्ला बाँके जाने तयारीमा हुनुहुन्छ तर अझै निश्चिय भएको छैन । बाँके जान नमिले काठमाडौंमा नै परिवारका सदस्यसँग भेटघाट गर्ने उहाँको योजना छ । राष्ट्रपतिका लागि हुने छलफलमा पनि उहाँ व्यस्त रहनुहुनेछ । पूर्णीमाको दिनभने प्रत्येक वर्षको दसैँमा जस्तै यसपालि पनि कांग्रेसको चियापानमा व्यस्त रहनुहुनेछ ।
एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दसैँमा टीका लगाउनुहुन्न । दसैँको फूर्सदलाई पनि काममै सदुपयोग गर्ने उहाँको सोच छ । दसैँका बेला कात्तिक १५ गतेदेखिको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने दस्ताबेज लेख्ने उहाँको सोच छ ।
कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको यसपालि दसैँ पोहोर परारको जस्तै छ । उहाँ दसैँमा घरमै आफन्त र कार्यकर्तासँग व्यस्त रहनुहुने छ ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालको यसपालि दसैँको टीका छैन । गएको जेठमा बुबाको निधन भएकाले उहाँको यसपालि टीका नभएको हो । उहाँपनि घरमै आफन्त र कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त रहनुहुने छ । पार्टीको छलफलसँगै उहाँ केही दिनका लागि रौतहट जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
एमाले नेता झलनाथ खनालको यसपालिको दसैँ घरमै बित्ने छ । घरमा निकै सरल ढंगले बस्नुहुने खनाल दसैँ पनि साधरण रुपमै मनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँपनि दसैँमा घरमै आफन्त र कार्यकर्तासँग व्यस्त रहनुहुने छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दसैँमा आफ्ना बुबाको हातबाट टीका थाप्नुहुन्छ । उहाँका बुबा काठमाडौंमा हुनुभएकाले दसैँ काठमाडौंमै पारिवारिक भेटघाटमा हुनेछ ।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको दसैँ अरु नेताको भन्दा फरक छ । उहाँले दसैँलाई भनेर खसी र च्यांग्रा पनि किनिसक्नुभएको छ । दसैँको टीकाको दिन काठमाडौंमै रहनुहुने पौडेल त्यसपछि दुई दिनका लागि तनहुँ जाँदै हुनुहुन्छ । तनहुँमा आफन्त र कार्यकर्तासँग उहाँको भेटघाट हुनेछ ।